Topy fivarotana lehibe 10 any Etazonia | Fitsangatsanganana tanteraka
Toeram-pivarotana lehibe 10 any Etazonia
Ny magazay folo tsara indrindra any Etazonia dia vokatry ny kolotsaina fialamboly sy fialamboly manjaka ao amin'ny colossus any Amerika Avaratra ary miparitaka manerana an'izao tontolo izao izany. Porofo tsara an'izany ny habetsak'ireo magazay efa ananantsika any Espana.
Etazonia dia lehibe tahaka ny kaontinanta iray ary fahasamihafana lehibe eo amin'ny kolontsaina miara-monina ao. Fa ny ampahany tsara amin'ny mponina dia manana ny fomba fialamboly. Mpanohana ny toerana fialamboly lehibe izay ahitan'izy ireo ny zava-drehetra, manomboka amin'ny fivarotana lehibe ka hatramin'ny fiantsenana mankany amin'ny sinema izay ahafahanao mankafy sarimihetsika amin'ny alàlan'ny fivarotana lamaody sy kojakoja na kafe sy trano fisakafoanana hohanina. Raha dinihina tsara, tsy hevitra ratsy ny fananantsika ny zavatra rehetra eto an-tanana. Saingy, tsy mila adim-potoana intsony, hasehonay anao ireo habaka ara-barotra goavambe ireo.
1 Fitsidihana ireo magazay folo voalohany any Etazonia
1.1 Bloomington Mall any Amerika
1.4 Ny fivarotana ao amin'ny faribolana Columbus
1.5 Amin'ny alàlan'ny Bellagio, be pitsiny amin'ireo ivontoerana fiantsenana folo tsara indrindra any Etazonia
1.6 Ny Galleria
1.8 The Grove, tany am-boalohany eo amin'ireo magazay folo tsara indrindra any Etazonia
1.9 Ilay tsenambarotra ao amin'ny Short Hills
1.10 South Coast Plaza, kanto amin'ny iray amin'ireo magazay folo tsara indrindra any Etazonia
Fitsidihana ireo magazay folo voalohany any Etazonia
avy amin'ny New York mankany Los Angeles ary avy any Anchorage ny Houston, ny firenena Amerika Avaratra dia manana habaka ara-barotra be dia be. Saingy ny sasany dia miavaka amin'ny habeny sy amin'ny fahatanterahan'ny tolotra nomeny. Andao hofantarina izy ireo.
Bloomington Mall any Amerika
Bloomington dia tanàna kely ao amin'ny faritanin'i Hennepin (Minnesota). Na izany aza, manana ny iray amin'ireo ivontoerana fiantsenana folo voalohany any Etazonia izy io. Manolotra anao fivarotana 520 amin'ny karazany rehetra, trano fisakafoanana dimampolo eo ho eo ary, ho an'ny ankizy, ny valan-javaboary lehibe indrindra ny firenena rehetra.
Miparitaka amin'ny làlambe 17 ity habaka midadasika ity ary mikarakara hetsika maimaimpoana efa-jato isan-taona. Toy ny hoe tsy ampy daholo izany rehetra izany dia manana sinema 14, aquarium ary na dia golf golf kely aza.
Ity ivon-toerana lehibe ity dia ao amin'ny tanànan'ny Sunrise, County Broward, sahabo ho XNUMX minitra avy eo afovoan-tanàna Miami. Izy io dia manambatra ireo trano ara-barotra ao anatiny, ilay antsoina hoe Sawgrass Mall, miaraka amin'ny hafa any ivelany any amin'ny faritra fantatra amin'ny hoe Ny oasis. Ankoatr'izay, manana fametrahana fahatelo izy, antsoina Ny Colonnades ao Sawgrass Mills, izay ny marika lafo indrindra eto an-tany dia manolotra ny vokariny amin'ny vidiny mihena be.
Azonao atao ny mahita azy eny amin'ny sisin'ny tanànan'i Philadelphia, any Pennsylvania. Manodidina ny XNUMX metatra toradroa dia izy io, araka ny filazan'ny tompony, no toeram-pivarotana lehibe indrindra amin'ny morontsiraka atsinanan'i Etazonia.
Izy io dia manana magazay 450, trano fisotroana ary trano fisakafoanana, ny sasany amin'ireo marika malaza toy ny Apple, Burberry, Louis Vuitton na Sephora, ary mahazo manodidina mpitsidika roapolo tapitrisa taona.
Ny fivarotana ao amin'ny faribolana Columbus
Eo amin'ny arabe misy an'io anarana io ihany no misy azy, eo afovoan'ny Manhattan, New York, ary ao anatin'ny Time Warner Center, vondrona skyscraper izay misy trano fandraisam-bahiny, trano fisotroana ary trano fisakafoanana maromaro. Ao amin'ity foibe fiantsenana ity no ahitanao fivarotana marika malaza sy lafo indrindra toa an'i Swarovski, Armani na Thomas Pink.
Anisan'ireo trano fisakafoanana ananany manana chef maromaro ianao Isan'andro, izay misy kintana Michelin telo, ary ny Masa, Nahandro Japoney ary heverina ho lafo indrindra eran'ny tanànan'i New York. Ary koa, raha te-hitsangatsangana ianao mba hampidina ny sakafonao, roa-polo metatra fotsiny ianao dia manana ilay malaza Central Park.
Amin'ny alàlan'ny Bellagio, be pitsiny amin'ireo ivontoerana fiantsenana folo tsara indrindra any Etazonia
Izy io dia ao amin'ny trano Hotel Bellagio, ao amin'ny Las Vegas. Ny maritrano kanto sy ny haingon-trano mihaja dia hanome anao ny hevitrao amin'ny zavatra mety ho hitanao ao amin'ireo toerana misy azy: ny magazay lafo vidy indrindra eto an-tany ary ny fanehoana farany ny haitraitra. Ireo marika toa an'i Yves Saint Laurent, Chanel, Hermes, Gucci na Prada dia manana fivarotana ao amin'ny Via Bellagio.
Mikasika ireo bara sy trano fisakafoanana misy azy, etsy ankilany, manana izany ho an'ny tsiro sy paosy rehetra izy. Raha ny tena izy, afaka mihinana dimy dolara eo ho eo ianao. Anisan'ireo trano fandraisam-bahiny amin'ity ivontoerana fiantsenana ity, hiresaka momba ny kafe Gelato sy Bellagio, Michael Mina na Shintaro izahay.
Izy io angamba no ivon-toeram-piantsenana malaza indrindra eto Houston ary na dia ny fanjakana Texas manontolo aza. Eo anelanelan'ny toerana akaiky indrindra roa eto an-tanàna, ny Fahatsiarovana sy ny Oaks Oaks, tsy izany no toerana tsara indrindra hahitana vokatra mora vidy.
Na ahoana na ahoana, dia mahavariana izy io, miaraka amina fivarotana an-jatony, trano fisakafoanana maro, hotely roa, dobo filomanosana ary koa ny banky. Izy io koa dia misy zaridaina eo akaiky eo, manokana ny Gerald D. Hines Waterworld, izay ahitanao ny fisehoan'ny rano malaza indrindra any Houston.
Any amin'ny tanàna kely misy an'i McLean an'ny fanjakana Virginia ary misy fivarotana, trano fisotroana ary trano fisakafoanana efatra rihana. Anisan'ireo marika manana toerana ao amin'ity foibe ity ny Adidas, Apple, Disney, Gucci, Diesel, Lego na L'Occitane en Provence.
Mikasika ireo trano fisakafoanana ihany dia be dia be ny fivarotana sakafo haingana toa ny MacDonald's na Shake Shack, miaraka amin'ny sakafo Meksikana na Aziatika hafa toa ny Panda Express
The Grove, tany am-boalohany eo amin'ireo magazay folo tsara indrindra any Etazonia
Ity ivon-toerana lehibe ity dia ao Los Angeles, California, dia manana ny maha-izy azy momba ny hafa. Ary hita izany ny any an-tokotany, toy ny hoe faritra hafa ao an-tanàna ihany io. Manokana, ho hitanao ao amin'ny Road Drive, izay misy koa ny tsy dia malaza loatra Tsenan'ny tantsaha, mifantoka bebe kokoa amin'ny sakafo.
Rehefa mandeha mamaky ny arabe mamorona ny The Grove ianao dia hieritreritra fa niverina tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX ianao noho ny endrik'ireo trano sy ny haingon'ireo fivarotana. Anisan'ireny, Anthropologie, Australia UGG, Madewell ary Johnny Was, eo akaikiny misy trano fisakafoanana maro sy sinema valo ambin'ny folo.
Ilay tsenambarotra ao amin'ny Short Hills
Any amin'ny tanàna kely misy anarana mitovy ihany no misy azy ao amin'ny faritanin'i Essex, an'ny fanjakana New Jersey. Manana fivarotana marika malaza sy malaza toa an'i Cartier, Louis Vuitton Dior na Dolce & Gabbana. Ary miaraka amin'ny trano fisakafoanana efatra ambin'ny folo izay manome anao sakafo haingana fa koa lovia voaomana amin'ny an-tsipiriany sy ny sakafo vegan. Anisan'ireo anaran'ireny, Primo Mercato, Nordstrom Marketplace Café na Forty Carrot.
South Coast Plaza, kanto amin'ny iray amin'ireo magazay folo tsara indrindra any Etazonia
Mba hamaranana ny fitsidihanay ireo ivontoerana fiantsenana folo tsara indrindra any Etazonia dia holazainay aminao ny momba ity iray any Costa Mesa, Orange County, California. South Coast Plaza dia mamela anao tsy ho latsaky ny fivarotana 230 sy trano fisakafoanana 30, ho fanampin'ny ivon-javakanto Segerstrom, coliseum manaitra izay manolotra kaonseritra sy seho hafa.
Anisan'ireo teo aloha, ny marika toa an'i Alexander McQueen, Hugo Boss, Balenciaga, Carolina Herrera, Ermenegildo Zegna ary Christian Louboutin dia manana trano ao amin'ity ivontoerana fiantsenana ity.
Ho famaranana, nasehonay anao ny ivontoerana fiantsenana folo tsara indrindra any Etazonia, firenena iray izay anisany be dia be ny tanàna kely rehetra dia samy manana ny azy avy. Ary izany ve fihinanana dia mitovy fomba fiaina amerikana na fomba fiaina amerikanina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Toeram-pivarotana lehibe 10 any Etazonia
Fampianarana ankizy Ateniana
Cave an'ny maitso